Mooshinkii laga gudbiyay Waare oo caawa laga laabtay iyo lacagta ku baxday!!
07 October, 2018 in Wararka by
Madaxtooyada Hir-Shabeelle ee Magalada Jowhar waxaa Caawa kulan ku yeeshay Madaxweynaha Hir-Shabeelle, guddooomiyaha baarlamaanka iyo xildhibaano waxaana ay kaga hadleen mooshinkii dhawaan laga gudbiyay Madaxweynaha.
Kulanka soo saacado qaatay kadib ayaa Guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabelle Cismaan Barre Maxamed waxa uu ku dhawaaqay in Xildhibaannada Hir-Shabeelle ay ka noqdeen Mooshinki laga keenay Madaxweynaha Hir-Shabelle Maxamed Cabdi Waare.
Wararka aan heleyno ayaa sheegaya in Madaxweynaha Hirshabelle ka laabashada mooshinkan ku bixiyay lacag badan, waxa uuna Madaxweynaha dadaal badan uu sameeyay ugu dambeyn ku guuleestay in mooshinka fashilmo.
Xildhibaano katirsan Baralamaanka maamulka Hirshabelle ayaa noo xaqiijiyay in Madaxweyne Waare lacag ku bixiyay in laga laabto mooshinka laga gudbiyay, waxaana Xildhibaan walbo oo kamid ah Hirshabelle la siiyay lacag dhan Kun Dollar.
Gudoonka Baarlamaanka Maamulka Hirshabelle ayaa sidoo kale lacag badan lagu siiyay sidii mooshinkan loo baajin lahaa, waxaana caawa guuleestay dadaalkii uu Madaxweyne Waare ku bixiyay in Mooshinka fashilmi.